Indaba Yethu - i-Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
I-QuanZhou Camei Stationery Co., Ltd yasungulwa ngo-1996. Kusukela eshabhu elincane labantu abangama-20, ngokusebenzisa wonke umuntu.'ngokuzikhandla nokuzinikela, sesithuthuke saba yibhizinisi eliphelele elihlanganisa ucwaningo, ukwakhiwa nokudayiswa kwemikhiqizo yokubhalela.
Ngo-2000, sathuthela efekthri entsha ukuze sithuthuke.
Manje, inkampani yethu inezindawo zokukhiqiza ezingaphezu kuka-10000 square metres kanye neshede.
Abasebenzi abangaphezu kuka-200
Sinomnyango wethu wezokuthengisa wamazwe ngamazwe.
Abathengisi abaningana abaqeqeshiwe, ama-oda angashintshi unyaka wonke anemiphumela emihle yokuthengisa.
Inkampani yethu isiqalile ukukhiqiza imikhiqizo enemvamisa ephezulu kusukela ngo-1996, imigqa yethu yokukhiqiza yama-high-frequency inemishini eminingi ethuthukisiwe kanye nabaqhubi abanolwazi.
Siphinde samisa imigqa yokukhiqiza yokuluka enemishini yokuluka ethuthukile engaphezu kuka-200 kanye nabasebenzi abanamakhono.
Kukhona futhi umugqa wokukhiqiza ogxile emikhiqizweni yezikhwama zesikhumba esekwe ku-glue kanye nabasebenzi abanekhono abanekhono lobuchwepheshe be-countertop glue.
Sethula ukuphathwa okuthuthukisiwe kokukhiqiza kweToyota ngo-2013 ukuze senze imikhiqizo ibe bushelelezi, sithuthukise ukusebenza kahle, futhi siqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo engcono.
Inkampani yethu ikhiqiza izikhwama eziningi zokubhala, izitayela eziyingqayizivele ezinekhwalithi enhle.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nasezifundeni ezifana ne-Europe, USA kanye ne-Japan.
Inkampani yethu iye yanamathela ngokungaguquki kukhwalithi nesikhathi sokulethwa iminyaka engaphezu kwengu-20, futhi yazuza izindumiso ezivela kumakhasimende yonke indawo.
Uhambo lwenkampani: Sihlela uhambo lweqembu njalo ngonyaka lwabasebenzi;Isibonelo: 2016 ChangTai 2 uhambo lwezinsuku;2017 FuZhou PingTang 2 uhambo lwezinsuku;2018 NingDe TaiLao Mountain uhambo lwezinsuku ezingu-2;
Imisebenzi;Izisebenzi zekota zisebenza njengokuqwala intaba yaseNtwasahlobo, umcimbi wezemidlalo wasehlobo, umqhudelwano wokugingqa amadayisi wasekwindla (isiko esifundazweni saseFujian esiseningizimu), kanye nedili lokuphela konyaka ngaphambi kukaNcibijane wamaShayina.
Ngo-2016, inkampani yethu imeme amakhasimende amaningi ngokubambisana ukuba ahambele umcimbi wethu wokugubha iminyaka engu-20 futhi kwaba umcimbi ojabulisayo kuwo wonke umuntu.
Ukuqeqesha: Inkampani yethu isungule i-Camei Academy.Sihlose ukuqasha njalo ochwepheshe ukuze bafundise futhi bahlele ukuqeqeshwa kwangaphandle kwazo zonke izinduku.